Hadii Fanaxlowga kugu yaryahay Sidan ayaad u Farsameesan kartaa (Sirta Nolosha) - Hablaha Media Network
Hadii Fanaxlowga kugu yaryahay Sidan ayaad u Farsameesan kartaa (Sirta Nolosha)
HMN:- Hoyga sirta Nolosha ayaa tala fiican kuu haysa ha xishoon sababta oo ah Noloshaada iyo caafimaadkaba xishood malahan ee naga baro farsamooyin ku anfacaya.
Saaxiibow hadii ay gaaban tahay xubintooda taranka ayaan ku guuleysan in macaantooda gaarsiiyaan gariirka galmada ,maadaama malanyaroowgooda gaareyn darbiga xubinta taranka .
Raggaasi ayaa waxaa lagula talinayaa in habka galmada wax ka badalaan oo ay raacaan habkaan oo sahlaya in malabyarowga gaaban meel fog gaaro isla markaana gabarta ku gaarto gariirka galmada .
Warbaahinta ka faaloota Sirta nolosha ee wacdaraha.com oo soo xiganaysa Warbaahinta caalamka ee dhanka nolosha ka hadla ayaa waxa ay Habkaan dadka faa’iidada u ah soo ogaatay in loo yaqaano Hab Galmeedka Faransiiska .
Habkaan waxaa waaye in Qofta ay Jilbaha dhulka surato iyada oo foolkeeda dhulka dhigayso waxaana Fanaxlogeeda soo adinaysa fanaxlowga Ninka si uu dhanka gadaalee howsha uga fushado.
Hadaba qaabkan Ninka gadaal ayuu kaga imaanaya iyadoo uu ku dhajinayo oo ku ku riixayo ka dib ayuu garacaya si Xubintiisa yareed gaabow geed ma kori karo ahayd ay fal fiican u samayso.